Apple tamin'ny 2015: vokatra vaovao, fahatsapana mahazatra | Vaovao IPhone
Tapitra ny 2015 ary manomboka ny 2016, ka tsy daty ratsy hijanonana sy hijerena izany. Herintaona izay i Apple no namoaka sokajy vokatra vaovao izay mbola tsy novokarany teo aloha. Saingy tsy afaka mijanona amin'ity vokatra tokana ity izahay satria koa nanavao sokajy hafa miaraka amin'ny vokatra vaovao izay hanamarika ny làlana mandritry ny taona vitsivitsy. Ny Apple Watch, ny iPad Pro, ny Apple TV 4G, ny MacBook ... Ny filohan'i Apple amin'ny vokatra vaovao dia naharesy lahatra ny maro, navelany ny hafa, saingy tsy namela olona tsy miraika izy ireo. Apple dia voapanga ho nanana taona "beta" satria tsy namoaka na inona na inona vita.
1 Vokatra "tsy vita" vaovao
2 Sarimihetsika taloha ihany
Vokatra "tsy vita" vaovao
Ny sasany niampanga an'i Apple ho namoaka vokatra mbola tsy vita. Mazava ho azy fa hiankina amin'ny fandinihana azy ny zava-drehetra, raha ny tokony ho izy, rehefa samy mihevitra fa vita ny vokariny. Ny Apple Watch dia natomboka tamin'ny olan'ny fahazoana maro. Na dia tsy fantatsika aza ny isan'ny varotra ho an'ny famantaranandro, satria manantitrantitra ny tsy hanolorana azy ireo i Apple, dia toa ambony lavitra noho ny nandrasan'ny orinasa ny fangatahana, ka tsy zakan'izy ireo ny fangatahana rehetra ary nanao fanombohana mihoampampana izy ireo naharitra ny fotoana nielezana nanerana an'izao tontolo izao.
Na eo aza ireo olana ireo, ny isan'ny fampiharana ho an'ny Apple Watch dia nitombo haingana, ary fotoana fohy taorian'izay dia natomboka ny tokony ho an'ny maro ny kinova voalohany amin'ny rafitra fiasa: watchOS 2. Apple dia nandefa fanavaozana izay manolotra fahafaha-manao vaovao ho an'ny mpamorona toy ny rindranasa zanatany sy ny fidirana amin'ireo sakan'ny fiambenana.
Ilay Apple TV 4. vaovao dia voampanga amin'ny zavatra mitovitovy amin'izany. Famolavolana tena mitovy amin'ilay teo alohany, fa hevitra hafa tanteraka amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ireo rindrambaiko no tena mpihetsiketsika. Vokatra hafa mbola tsy vita? Raha ny filazan'ny sasany, dia satria tsy manana ny serivisy fahitalavitra streaming izay hatombok'i Apple. Io serivisy io dia mbola tsy notondroin'i Apple mihitsy, fa efa voampanga ho tsy nahomby izy noho ny tsy fahazoany ara-potoana azy. Ny fitaovana haino aman-jery vaovao an'i Apple dia efa manana rindrambaiko mifanaraka amin'ny 2600 mifanaraka aminy, ny sasany amin'izy ireo dia tena miavaka, ary tsy mahatratra 2 volana aorian'ny fandefasana azy.
Ny MacBook vaovao koa dia loharanon'ny fitsikerana be an'ny orinasa, indrindra amin'ny fanapahan-keviny hanafoana ireo mpampifandray rehetra ary hamela iray fotsiny. USB-C azonao ampiasaina amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny famoahana azy io hatramin'ny fampifandraisana kapila mafy na fisehoana ivelany. Fahaleovan-tena izay manome anao be dia be handany ny andro nefa tsy mila enta-mavesatra izany, fampisehoana Retina tena tsara ary hery mihoatra ny ampy hanatanterahana ireo asa izay namboarina tamim-pahamendrehana (Mino aho fa izay mila mampiasa Final Cut Pro dia mividy an'ity solosaina) amin'ny lanjan'ny 920 grama fotsiny dia tsy ampy handresena lahatra ireo izay, na dia tsy nanandrana akory aza izy ireo, dia notsikerain'izy ireo ny heriny ambany noho ny processeur Intel Core M.
Ny filokana lehibe farany tamin'ny taona dia ny iPad Pro vaovao. Hevitra vaovao avy amin'ny Apple, araka ny maro izay mitohy be loatra amin'ireo kinova taloha, izay manandrana manome ny iPad ireo fitaovana ilaina mba hanombohan'ny mpampiasa handinika ny mety hiova ny portable azon'ity tablety vaovao ity. Ny habeany lehibe sy ny heriny lehibe an'ny mpikirakira azy, ary koa ny kalitaon'ny efijery ary ny Apple Pencil vaovao izay mameno azy, dia mamela ny tany hisaka tanteraka hahatratrarana an'io, saingy mbola manana ny fetrany goavana amin'ny fananana ny iOS ho miasa. rafitra. Eny, marina fa nihatsara be ny rindranasa, fa efa misy ny fampiharana matihanina tsara ho an'ny iOS, saingy mbola katalaogy tena zara ihany io ary koa ny asany dia tsy mahatratra ireo mitovy amin'ny desktop-ny. Ivelan'ny famolavolana sary sy ny indostrian'ny mozika, ny iPad Pro dia mbola tsy hita ho vokatra afaka mahazaka solosaina finday tsara.
Sarimihetsika taloha ihany
Misy mahatadidy ilay iPhone voalohany? Io smartphone io izay nanova ny foto-kevitry ny finday avo lenta ary iray amin'ireo vokatra mahomby indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ny taranaka voalohany, natomboka tamin'ny 2007, tsy nanana fifandraisana 3G, tsy afaka nandefa MMS ary tsy nanana App Store akory hahafahana mametraka rindranasa. Tsy nanana safidy akory aza ny 'handika sy hametaka', tsy lazaina intsony ny tsy fananana lalao tokana ao amin'ny katalaogin'ireo fampiharana efa napetraka. Vitsy izao no mahatadidy ny lesoka tamin'ny finday voalohany Apple.
Tsy vaovao koa fa voampanga ho nanandrana nandrakotra vokatra be loatra i Apple, satria manizingizina ny sasany hino antsika ny sasany. Aza adino fa Apple dia nisy mpanonta printy isan-karazany mihitsy aza tamin'ny solosain-dry zareo, Tsy lazaina intsony ny console lalao nataony, Apple Pippin, navoaka tamin'ny 1995 tamin'ny $ 599. Ny fametrahana ny iPod voalohany aza dia nahiahiahy mihitsy. Misy misalasala ve fa ny iPod dia iray amin'ireo vokatra sahanin'ny orinasa efa an-taonany maro? Voatsikera mafy tokoa ny taranaka voalohany ary betsaka ny olona nangataka tamin'i Apple hifantoka amin'ny zavatra nataony hatrizay ary hiala amin'ny "kilalao" ho an'ny fanjifana betsaka.
Eny, mety marina fa ny taranaka voalohany amin'ny vokatra Apple dia manana ny lesony, mieritreritra aho fa izany dia zavatra iray izay tsy maintsy ekentsika rehetra, na mpankafy bebe kokoa an'ilay orinasa isika. Marina ihany koa fa imbetsaka ny fanantenana izay noforonintsika tamin'ny tsaho avy eo dia mahatonga ny vokatra farany tsy mifanaraka amin'ny fanantenana lehibe noforonina. Fa misy koa zavatra mazava be: toy ny matetika diso tanteraka ilay fehezan-teny milaza hoe "Tsy nisy io Jobs io". Apple dia nanao toy izany foana, ary amin'izao fotoana izao dia tsy afaka milaza ianao fa nanao ratsy tokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Apple tamin'ny 2015: vokatra vaovao, fahatsapana taloha ihany
Ahoana ny fomba hisorohana ny mailaka ho an'ny iOS tsy hanisy marika ny daty amin'ny manga
Ahoana ny famelomana haingana ny iOS App Store